शरिरका यी ५ स्थानमा कोठी हुने व्यक्तिे धरै भाग्यमानि हुन्छन् « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
२४ श्रावण २०७७, शनिबार ००:००
कोठी भन्नेवितिकै हामीसबैलाई थाहाभएको कराहो । किन भने हरेक मानिसको एक न एक ठाउमा कोठी हुने गर्दछ । कोठी कोहीमानिसलाई एकदम मन पर्छ भने कोर्हिलाई मन पर्दैन ।
आज हामी तपाइलाई हाम्रो ५ स्थानमा कोठी हुने निकै भाग्यमानि मानिन्छ त्यही विषयमा चर्चा गर्ने जर्मको गर्ने छौँ । तर कोठी कुन स्थानमा हुन्छ, त्यसले भाग्यलाई पनि दर्साउँछ।
ज्योतिषको आधारमा आज हामी तपाईंलाई यस्ता केही स्थानबारे जानकारी दिँदै छौं जहाँ कोठी हुनु भाग्यको प्रतिक मानिन्छ।
१. निधारको मध्य भागमा कोठी
हस्तरेखा ज्योतिषका अनुसार जुन ब्यक्तिको निधारको मध्य भागमा कोठी हुन्छ ति निकै भाग्यमानी हुन्छन्। हरेक क्षेत्रमा यि ब्यक्तिलाई सफलता प्राप्त हुन्छ ।
नाकमा कोठी भएका मानिसहरु निकै नखरा गर्ने किसिमका भएपनि उनीहरुको मन निकै कमलो, राम्रो र सच्चा हुन्छ। यसका साथै यस्ता मानिसहरुले आफ्नो करियरमा निकै प्रगती गर्ने गर्दछन् । प्रगती ढिला भएपनि उनीहरु आफ्नो करियरमा एक राम्रो गन्तव्यमा पुग्छन्।
३. हत्केलाको कोठी
हातको कोठी हुनु निकै शुभ र राम्रो मानिन्छ। ज्योतिष अनुसार जो मानिसको हत्केलामा कोठी हुन्छ, त्यस्तो व्यक्ति भाग्यमानी हुन्छन् विशेषगरी कोठी मुट्ठीभित्र पर्छ भने। यस्ता मानिसको जीवनयापन निकै राम्रो तरिकाले हुनुका साथै निकै धनवान पनि हुन्छन्। विवाह पछि यस्ता मानिसलाई ससुराली र घरमा पनि निकै सम्मान मिल्ने गर्दछ।
४. पिठ्युँमा कोठीः
जो व्यक्तिको पिठ्युँमा कोठी हुन्छ, उनीहरु निकै रोमान्टिक हुन्छन् र घुमफिरका शौखिन हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिहरु निकै हँसीमजाक गर्ने प्रवृत्तिका हुन्छन्। पिठ्युँमा कोठी हुनेहरुलाई उनका सन्तानले निकै माया गर्ने गर्दछन् । उनीहरु सबैसँग सुखी हुन्छन्।
चिउँडोमा कोठी हुनु शुभ संकेत मानिन्छ। यस्ता मानिसहरुको बिग्रेको काम पनि बन्ने गर्दछ। जो मानिसहरुको चिउँडोको बिचमा कोठी हुन्छ उनीहरुको पार्टनरसँगको सम्बन्ध निकै राम्रो हुन्छ । साथै यस्ता मानिसहरु आर्थिक रुपमा पनि सबल हुन्छन्।
प्रकाशित मिति: Aug 8, 2020
मानिसहरुले प्रेममा धोका खाएको धरै सुन्ने गरिन्छ तर प्रमेमा धोका खाएकै कारण आत्महत्या पनि गरेको